अर्धनग्न भैंसी नचाउने बेश्यालय महोत्सवहरु बन्द गरौ, बरु राजस्व असुल्ने देहव्यापार खोलौ - KTMreports.com
KTMreports १० फाल्गुन २०७४, बिहीबार १६:५४ 120 पटक हेरिएको
देशमा अचेल महोत्सवको चटारो बढेको छ । तिनै सिजनेवल महोत्सवहरुमा प्रस्तुति दिने देशका नग्न गहनाहरुको चर्चा पनि खुबै चलेको छ ।जिउ डाल हेर्दा नत चट्टक मिलेको छ, बरु नाङ्गा भैंसी जस्तै देखिन्छन । गायको स्वर सुन्दा नत सुरिलो मनमोहक बनाउ छ, बरु बगेर्नो भैंसी कराएको जस्तो सुनिन्छ । नृत्य हेर्दा नत मनै लोभ्याउने अदायं छ, बरु नाङ्गो भैसी राँगा खोजेर ब्रुक-ब्रुक उफ्रे जस्तो देखिन्छ…। तर पनि तालि गडगडाहट छ, वान्समोरको कोकाहल मच्चिएको छ, ति कुन आत्माका मनोरञ्जक हुन् बुझ्नै गाह्रो छ, सायद ति कोकाहलमा उफ्रिने जमात पनि भैसी युगका मानवहरु हुन् ।
यस्ता महोत्सवका प्रदर्शनीहरुले आगामी पिडीलाई कता तिर डोर्याउने हो ? यी महोत्सवका उदेश्य के हुने हुन् ? बढो चिन्तन गर्ने बेला आएको छ । ब्यापारी मुलक महोत्सवहरु पनि पश्चिमेली रहन सहनको आवरणले लपक्क पोतिएका छन् । महोत्सवहरुको झलक हेर्दा एक हिसाबले नेपालमा पनि बेश्यालयहरु बैधानिकता पाइसके जस्तो भान हुन्छ । खुलेआम सेक्स अफर भैरहेको जस्तो छ ।
ज्ञान तथा सिपमुलक महोत्सवहरु ब्यबस्थापन गर्न ठुलो आर्थिक लगानी आबस्यक पर्ने हुँदा, यिनै नग्न कलाकारहरुलाई सस्तो लगानी गरेर मनग्य फाइदा लिने ध्याउन्नमा लागेका कथित आयोजकहरुले आमा बाबा दाजुभाई तथा आफन्त गुमाएर लाज हराएका यीनै नृत्यांगनाहरुको प्रस्तुतिलाई प्रशय दिइ रहेका छन् ।यी कलाकारका संरक्षक र उत्पादक पनि यिनै आयोजकहरु हुन् । यिनका भविष्य पनि यिनै महोत्सवधारीहरु हुन् ।
कला र क्षमताले भरिपुर्ण देशका वास्तविक कलाकारहरु महोत्सवको प्राथमिकतामा पर्नै छोडे । सके सम्म देखाउने र हल्लाउने कलाकार भए बढी लाभ लिने मानसिकता देहव्यापारी मानसिकता बन्यो । देहव्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने महोत्सवका प्रस्तुतिहरु बेश्यालय महोत्सवका स्वरूप नै हुन् । मंचको अगाडी नग्न नतर्कीहरु नांगै नचाउदै मंचको पछाडी अतिथि बनेर मुख दर्शक बनेका आयोजक र अतिथिहरु लाज सरम हराएर फिस्स हाँसो छोडी रहेका हुन्छन।
ज्योति मगरको आगमन संगै देशको कलाकारिता क्षेत्रमा पश्चिमेलि छाडापन एकाएक मौलाएको साँचो हो । कला र गलाले भन्दा देखाउने अश्लीलताले स्थान पाएकै हो । ज्योति मगर भन्दा अगाडी पनि केहि नग्न कलाकारहरुको आगमन पनि भएकै हो तर ज्योति जसरि टिक्न नसकेर बिलाएकै हुन् । कारण ज्योतिको अश्लिलता पचाउने आँट भने मान्नै पर्छ । उनलाई बाल मतलब पनि छैन । जे सुकै देखियोस ।
खुलेआम पोर्न फिल्म खेल्छु भन्ने अर्चना पनेरु पनि आजभोली थकित देखिन्छिन । अब उनको उखर्माउलो चर्चा लोपोन्मुख अबस्थामा देखिन्छ ।
नेपालको कलाकारितामा सेक्सुअल भर्सन अझै पच्ने अवस्थामा छैन भन्ने उदाहरण हुन् अर्चना पनेरु ।धेरैले कल्पना गरेका थिए अर्चनाको भल्ग्यारिटीका कारण पहिलो फिल्म चल्नेछ तर कसैले हेरेनन् । फलस्वरूप उनि बिलिन हुँदै छिन । मतलव नेपालीहरु अझै अश्लिलता मन पराउदैनन । बरु महोत्सववालाहरु उद्योग खोलेर ज्योति, सरस्वती, चन्दाहरुलाई बिकाई रहेका छन् । ज्योति मगरको बाटो पछ्याएकि अर्की सरस्वती लामा आफुलाई रक गायिका ठान्छिन । लोक गायिको फरक धारबाट आफुलाई उभ्याउन खोज्ने उनको उदेश्य ज्योति मगरको बिपरित रक भर्सनमा आफुलाई उभ्याउन खोज्नु हो, तर कला क्षमताको हिसाबले यिनिमा झन् ज्योतिको भन्दा शुन्यता देखिन्छ ।
बरु ज्योति मगरको ‘उही मुलाको सिन्की, उहिमुला चाना’ गित धेरै पपुलर गित हो, जसको कारण ज्योतिलाई यो बाटो तिर डोर्याएको थियो ।सरस्वती लामा छाडा बोलेरै चर्चामा आएकी कलाकार हुन् । एक अन्तर्वार्तामा मोडल बन्न ‘कि पुजी चाहिन्छ, कि मु* चाहिन्छ, भनेर खुलेआम बोले पछी चर्चामा आएकी गायिका हुन् ।